Udubaha udubdhexaadka ah ayaa ku guuldareysta - Hay'adda Abaalmarinta Reward
Blog Gawaarida farsamada ayaa ku dhacaya
adminaccount888 24th May 2019 News Latest
Caddeymaha laga heley 'ugudbinta macallinimada' oo aan la aqbalin habdhaqanka sida 'khiyaamo'.
Sheekadani waxay ka timaadaa Xeerka Sharciga ee Scottish-ka waxayna muujineysaa xuduudaha ay dejiyaan nidaamka sharciga si loo ilaaliyo nidaamka sharciga.
Qofka lagu eedeeyay "sexting" dadka uu aaminsan yahay inuu yahay carruur ayaa si guul ah u cambaareeyay dalabkii Crown ee ahaa inuu keeno caddayn ay soo ururiyaan laba qof oo loogu yeero "ugudbiyayaal".
Sheriff waxay xukuntay in caddayntu ay ahayd "mid aan la aqbalin" sababtoo ah habka loo isticmaalay eedaysanaha inuu ku dhex galo is-dhaafsiga farriimaha ayaa lagu qiyaasey "khiyaamo".
Dundee Sheriff Court maqlay in eedaysanaha "PHP"Waxaa lagu soo oogay isku daygii lid ku ahaa qaybaha 34 (1) iyo 24 (1) ee Dembiyada Galmada (Scotland) 2009 isaga oo u diraya farriimaha galmada ee warbaahinta bulshada si uu u rumaysto inuu yahay caruur da'doodu udhaxayso 14 iyo 12, laakiin ma jirin carruur sidaas oo kale ah.
Eedaysanuhu waxa uu ahaa, isaga oo aan la garanayn, isaga oo lagu eedeeyay in uu is waydaarsiyo farriimo "JRU"Iyo"CW", Labadaba dadka waaweyn ee ku nool England, kuwaas oo ku lug leh qorshe ay ku dayacmeen inay noqdaan carruur ku rajo beel, erayadeeda," ku qabtaan adhijirayaasha "iyaga oo ku qaadaya inay galaan fariimaha galmada.
Kadibna waxay u safreen Dundee si ay ula dagaallamaan eedaysanaha, kuwaas oo lahaa in lagu hayo ilaalinta isaga u gaar ah, maxkamadda ayaa loo sheegay.
Saddex daqiiqo ayaa loo hirgeliyey PHP, iyagoo ka hor istaagay awooda xukunka iyo oggolaanshaha caddaymaha la helay.
Mawduucyada iswaafajintu waxay caddeeyeen in hawlaha Mr U iyo Ms W ay farageliyeen xuquuqda asturnaanta ee qodobka 8 ee Heshiiska Yurub ee Xuquuqda Aadanaha, iyo in qirashada caddaynta maxkamadaynta ay ku lug leedahay maxkamada oo u dhaqmeysa "si aan habooneyn" xuquuqdiisa aadanaha.
Daqiiqada ku saleysan qodobbada Nidaamka Xeer-dejinta ee Baarista (Scotland) 2000 (RIPSA) ayaa diidday oggolaanshaha "dhamaan caddaynta Crown" oo loogu talagalay in lagu qaado eedaysanaha iyadoo la raacayo, iyadoo maqnaanshaha oggolaansho ka hooseysa RIPSA ee isticmaalka Mr U iyo Ms W " ", Caddayntoodu waxay ahaayeen" sharci darro "iyo in loo arko" aan la aqbalin ".
Dacwada dacwadda maxkamadaynta waxay ahayd saamaynta ah ee soo-saarka caddaynta noocaas ah ayadoo macnaheedu yahay in ay macquul tahay in lagu dhejiyo xaqiiq ahaan haddii aan si macquul ah u ahayn sharciga, iyo in ay ku kalsoon yihiin cadeymahan booliska iyo Crown, oo loo arko inay dulmiyaan waxay soo aruuriyeen caddaynta naftooda, waxay ahaayeen "dulqaad", waxay xumayn lahaayeen damiirka dadweynaha waxayna noqdaan "gardarro habka caddaaladda".
Sheriff Alastair Brown waxay diideen doodaha ku salaysan qodobka 8 ECHR iyo RIPSA, laakiin waxay caddeeyeen in caddaymaha ay soo ururiyeen Mr U iyo Ms W ay "aan la aqbalin".
Qoraal ahaan note, Sheriff Brown waxa uu yiri: "Waxaan gaadhay go'aanka ah in nidaamka uu ku shaqeynayo Mr U iyo Ms W ay sharci darro ahaayeen marxaladaha oo dhan, sidaa daraaddeedna, natiijooyinkoodu maaha kuwo aan caddaynayn ilaa mooyaane aan loo baahneyn wax khilaaf ah. Anigu ma aanan ku qanacsanayn in ay tahay in laga reebo.
"Si dhakhso ah u dhiib, waxa Mr U iyo Ms W uu sameeyay khiyaano. Waxay sameeyeen been abuur ah (oo ku saabsan aqoonsiga iyo astaamaha qofka ku shaqeeya koontada), si khalad ah (iyo, si khaas ah, si daacadnimo leh) si ay u keenaan natiijo wax ku ool ah (kuwaas oo ah, inay u jilciyaan kuwa furan inay jirrabaan si ay u galaan farriimaha). Hase yeeshee dhaqankooda ayaa ku jira dhammaan waxyaabaha ka mid ah dembiga khayaanada.
"Markii uu ku dhaleeceeyay qofkii lagu eedeeyay in uu yahay Minto oo loo adeegsado farriimo elektaroonik ah, waxay markaa u diyaariyeen in uu sii wado inuu sii wato isgaadhsiinta farriimaha illaa uu ka eegay, aragtidiisa, isaga qudhiisu u sameeyey hab sida ugu wacan xabsiga xabsiga. Taas waxay ku sameeyeen iyagoo sii wadaya mawqifka beenta ah iyo in uu sii wado inuu sii wado. "
Sheriff waxay ku qeexeen dhaqankooda sida "xisaabin iyo shaqeyn".
Waxa uu sii waday: "Mr. U wuxuu markaas u safray Dundee, laba nin oo kale, si ay ula dagaallamaan Minerka iyo in ay muhiim u ahayd booliska in ay u geeyaan saldhiga bilayska ee ammaankiisa. Dhibaatooyinka noocan oo kale ahi waxay leeyihiin kartida khalkhalka halista ah ee dadwaynaha iyo xaaladaha qaarkood, waxay ka dhigan yihiin dembiga jebinta nabadda.
"Waxay ahayd Mr U wuxuu rabaa inuu helo sawir, kaas oo uu u diri lahaa internetka isagoo u sheegaya in Minuter loo xiray dembiyada galmada ee caruurta. Maaddaama qofka la xiray ay u badan tahay inuu maxkamada yimaado maalinta xigta, daabacaadda sawir noocaan oo kale ah ayaa halis galinaysa maamulka caddaaladda iyo marmarka qaarkood inay qadariyaan maxkamad. "
Sheriff Brown ayaa sidoo kale diidday soo jeedinta in labadan nin ay ku dhaqmeen "iimaan wanaagsan".
"Intaa waxaa dheer," ayuu hadalkiisa ku daray, "feker ahaanteyda waxaa jira fikrado xooggan oo ku saabsan siyaasadda guud ee xagjirka ah ee ka soo horjeeda ka-reebitaanka ku lug-lahaansho noocan oo kale ah. Si aad u hubsatid, dembiga internetku waa arrin khatar ah, inkastoo ay aad uga adag tahay Mr U iyo Ms W u muuqday.
"Booliiska Scotland waxay si dhab ah u qaadaan. Laakin boolisku waa xirfad xirfad leh, oo waajib ah in lagaa tago booliska. Saraakiisha booliisku waxay ka shaqeeyaan nidaam taxaddar leh oo ah qawaaniin iyo kormeer waxayna yihiin kuwo dimoqoraadiyad ahaan la xisaabtami karo. Marka ay timaaddo booliiska qarsoodiga ah, waxay ku shaqeeyaan qaab nidaamsan oo qaabaysan oo nidaamsan oo loo hayo ilaalinta dadweynaha guud ahaan.
"Si looga cudurdaaro waxyaalahan oo kale dhacdooyinka noocaan oo kale ah waa inay dhiirrigeliyaan kuwa raba inay raacaan ficilkan si ay uga fekeraan inay ka shaqeyn karaan dibadda qaab dhismeedka sharci, inay u maleyaan inay ka shaqeyn karaan bannaanka sharciga, inay ka fikiraan inay shaqeyn karaan iyada oo aan la haynin xuduudaha si taxadar leh loo eegayo ee sharci-dejiyuhu u codsaday bilayska (kuwaas oo ay ku andacoonayaan in ay caawinayaan) iyo in ay u maleynayaan in ay awood u leeyihiin inay maxkamadaha u xakameeyaan jumladaha.
"Taasi waxay ka hor imanaysaa danta guud ee dadweynaha ee xukunka sharciga. Waxaan haysanaa, sidaasi oo kale, waxaan go'aansaday inaan sii adkeeyo diidmada caddaynta caddaynta illaa inta laga reebayo caddeynta Mr U iyo Ms W sida aan la aqbali karin. "